Cristiano Ronaldo oo kulanka El Clasico noqon karaya Boqorka Rigoorooyinka horyaalka La Liga – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo kulanka El Clasico noqon karaya Boqorka Rigoorooyinka horyaalka La Liga
(Spain) 28 Nof 2016. Cristiano Ronaldo ayaa sameyn karaya rikoodh cusub amaba bar-bareyn kara rikoodh horey loo dhigay haddii uu gool ku laad ama rigoore dhaliyo kulanka El Clasico ee usbuuca soo socda.
Ronaldo ayaa noqon kara boqorka rigoore tuurista horyaalka La Liga ee waqtigan haddii uu rigoore dhaliyo kulanka Barcelona ee 3-da bisha December isagoo soo bar-bareyn doona rikoodhka rigoore dhalinta horyaalka La Liga ee rugcadaagii hore ee Hugo Sanchez.
Taageerayaasha Barcelona ayaa aalaaba ku caaya Ronaldo naaneysta ‘PENALDO’ ee ah inuu inta badan Rigoore yihiin goolashiisa laakiin magacaas ayuu si toos ah ugu bixi doona taageerayaasha Barca hortooda kulanka ka dhici doona Camp Nou haddii uu rigoore dhaliyo.
Halyeygii reer Mexico Hugo Sanchez ayaa heysta iminka rikoodhka rigoore dhalinta horyaalka La Liga oo wuxuu dhaliyay 56- gool ku laad muddadii uu u ciyaarayay Atletico Madrid, Real Madrid iyo Rayo Vallecano, xiddiga reer Portugal ayaana u baahan hal rigoore uun si uu rikoodhkaas u bar-bareeyo.
Tababaraha iminka ee Everton Ronald Koeman ayaa ku jira kaalinta saddexaad isagoona dhaliyay 46-rigoore intii uu u ciyaarayay Barcelona oo ku darso tirada wuxuu ka ciyaari jiray daafaca dambe.
Lionel Messi ayaa liiskan kaga jira kaalinta 5-aad kaddib Koeman iyo Lyuboslav Penev oo wuxuu dhaliyay 42-rigoore.
Philippe Coutinho oo dhaq dhaqaaq ka sameeyey baraha bulshada...Muxuu ku yiri?